Taura kune mapofu emifananidzo kune vana - Ndiani ari pano?
Kuburitsa kwekubatana kwatinoenda kune mapikicha kunokurudzira kudzidza kunotamba kwemawanda pamwe nekufungisisa uye ruoko rwemaoko kuwirirana kwekutora vana. Nenzira iyi, vana vanodzidziswa kuti vakagadzira mufananidzo iwo pachavo.
Izvozvo zvinoshanda sei? Mwana anobatanidza iyo yakaverengwa nenhokwe. Pakuguma, chimiro chinozivikanwa kana chisikwa chinobuda. Mufananidzo unoguma unogonawo kuvezwa "semubayiro".
Tsvaga mune zvinyorwa zvedu zvitsva zvekuunganidza kuti tione mifananidzo. Dzvanya pahubatanidza kuenda kune peji ne template inoenderana:
Mifananidzo inonakidza nemashoko anonakidza | kusetsa
Painting kuvanhu vakuru - sei kwete kungoita ...